रेखासँग पहिलो भेटको महिना पछि आफै विवाहको प्रस्तावसहित घर पुगेका मुकेश, विवाहको ७ महिनापछि नै झुण्डिए – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > रेखासँग पहिलो भेटको महिना पछि आफै विवाहको प्रस्तावसहित घर पुगेका मुकेश, विवाहको ७ महिनापछि नै झुण्डिए
रेखासँग पहिलो भेटको महिना पछि आफै विवाहको प्रस्तावसहित घर पुगेका मुकेश, विवाहको ७ महिनापछि नै झुण्डिए
admin October 10, 2021 Uncategorized 0
बलिउड नायिका रेखा ६७ वर्षकी पुगिन् । उनको जन्म १० अक्टोबर सन् १९५४ को चेन्नईमा भएको थियो । रेखाको नीजि जीवन निकै विवादास्पद रह्यो । यासिर उस्मानको किताब ‘रेखाः द अनटोल्ड स्टोरी’ मा उनको जीवनका विभिन्न पाटोबारे चर्चा गरिएको छ ।
यसमा उनको विवाहको किस्सा छ । किताबमा बताइए अनुसार रेखा श्रीमान् मुकेश अग्रवालसँग किन टाढा भइन्, किन उनी श्रीमानसँग विवाहको तीन महिनापछि नै बोर भएकी थिइन्, किन उनको विवाह वर्षदिन पनि चल्न सकेन र विवाहको सात महिनापछि नै मुकेशले किन आत्महत्या गरेका थिए भन्नेबारे जानकारी दिइएको छ ।
जब मुकेशले गरे रेखालाई विवाहका लागि प्रस्तावः
यो किताबका अनुसार ४ मार्च सन् १९९० को अपरान्ह (पहिलो भेटघाटको एक महिनापछि) मुकेश अग्रवाल सुरिन्दर कौर (रेखाकी साथी) सँग रेखाको घरमा पुगे र विवाहको प्रस्ताव राखे । रेखा मुकेशको उत्साह देखेर अवाक थिइन् । रोचक कुरा यो थियो कि दुबैका परिवारका सदस्य मुम्बईमा थिएनन् । यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले विवाहका लागि निर्णय गरे ।
बेलुका रेखाले रातो रङको कांजीवरम साडी लगाइन् र मुकेशसँग विवाहका लागि मुम्बईको मुक्तेश्वर देवालय पुगिन् । नजिकै एउटा इस्कन मन्दिर पनि छ । तर भीडका कारण उनीहरु त्यहाँ जान सकेनन् । राती जब मुकेश र रेखा मुक्तेश्वर देवालय पुगे तब त्यहाँका पुजारी सञ्जय बोडस सुतिसकेका थिए । मुकेशले उनलाई उठाए र आफूहरु विवाह गर्न चाहेको बताए । सञ्जय रेखालाई देखेर चकित खाए किनभने उनी ती सेलिब्रिटीमध्ये एक थिइन् जो त्यो मन्दिरमा दर्शनका लागि धेरैजसो जाने गर्दथिन् । राती साढे १० बजे विवाहको मन्त्र पढियो । त्यतिबेला मुकेश ३७ वर्षका थिए भने रेखा ३५ वर्षकी थिइन् ।
जब हेमाले सोधिन्, ‘के उनी साह्रै धनी छन् ?’
विवाहपछि मुकेशले रेखालाई केही फिल्मस्टार साथी भएठाउँ गएर खुसीको खबर दिनुपर्ने बताए । तर रेखालाई यो कुरा चित्त बुझेन । उनले अकबर खान, सञ्जय खान र हेमा मालिनीको घरमा जाने इच्छा व्यक्त गरिन् । साथी सुरिन्दर कौरलाई लिएर उनी हेमा र धर्मेन्द्रको घर पुगिन् ।
यतिबेला हेमाले उनीहरुलाई निकै गहिरिएर हेरिन् र भनिन्, ‘अब यो नभन कि तिमीले यी व्यक्तिसँग विवाह गरेका छन् ।’ रेखाले जवाफ दिइन्, ‘हो, साँच्चै नै मैले यस्तै नै गरेँ । ’ पछि हेमाले सोधिन्, ‘के उनी साह्रै धनी छन् ?’ तर रेखाले यसको कुनै जवाफ दिइनन् ।
विवाहको २४ घण्टापछि नै उनीहरु हनिमूनमा गएका थिएः
विवाहको २४ घण्टापछि नै रेखा र मुकेश हनिमुनका लागि लण्डन गएका थिए । सुरुवाती दिन निकै राम्रा बिते । किनभने मुकेश र रेखा पहिलो पटक एक्–अर्कासँग समय बिताइरहेका थिए । तर हप्तादिन भित्रै रेखालाई महसुस भयो कि उनी र मुकेश एक–अर्काभन्दा निकै भिन्न छन् । मुकेशले एकैदिन थुप्रै औषधी खानुपर्दथ्यो, यो कुराले पनि रेखालाई असहज बनाएको थियो । त्यसपछि रेखाले ‘अब जीवनभरी सँगै बस्नु नै छ, यस्ता कुराहरु नजरअन्दाज गर्नुपर्छ’ भनेर सोचिन् । उनी आफूसँग धेरै कुरा गर्थिन्, ‘मैले यी व्यक्तिलाई सफल बनाउनु छ । के रेखाले चाहेको कुरा हासिल गर्न सक्दिनन् ?’
यी दुईले लण्डनमा एक हप्ताभन्दा बढी समय बिताए । रेखालाई महसुस हुन थालेको थियो कि मुकेशलाई केही कुराले असाध्यै तनाव दिइरहेको छ । विवाहको केही महिनापछि नै यी दुईबीच खटपट सुरु भयो र दुई अलग बस्न थाले । विवाहको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा मुकेशले आफ्नो नीजि समस्यासँग आजित भएर आत्महत्या गरे । मुकेशले आत्महत्या गर्दा थुप्रै मानिसहरुले रेखालाई दोषी ठहर गरेका थिए ।
नेपालकै इतिहाँसमा घट्यो यस्तो घटना, मन्त्री हमालले बुझाए २ दिनमै राजीनामा
टि’कटक बनाएर बस्ने ११ सरकारी कर्मचारीको जागिर चैट!
उमेर पुगेकाले मा’त्रै हेर्नुहोला यी म’हिलाको य’स्तो ह’र्क’त
अंधकारमा हराएकि निर्मलाकि अामाकाे यस्तो चित्कार, राज्यले नसुने कस्ले सुन्ने?
दुःखद प्रश्नः कसरी संकलन भयो निर्मलाकाे भजाइनल स्वाब?, के सबै नेपालीले डिएन चेक गराउनु पर्ने भो?